तिमी भ’र्जिन हो भन्ने प्रश्नमा चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीको यस्ताे जवाफ ! – Online Khabar 24
तिमी भ’र्जिन हो भन्ने प्रश्नमा चर्चित मोडल अञ्जली अधिकारीको यस्ताे जवाफ !
मनोञ्जन दुनियाँका हसिला रसिला अन्र्तवार्ता लिने उत्सव रसाईलीसँगको कुराकानीमा उनले आफू क’न्याकु’मारी (भ’र्जिन) नरहेको खुलासा गरेकी हुन् ।
अविबाहित मोडल अञ्जली अधिकारीलाई उत्सव रसाईलीले आर यू भ’र्जिन भनेर प्रश्न गर्छन् । उनले बडो शानका साथ नो भन्छिन् ।
अञ्जलीले नो भन्दा उत्सव रसाईली अचम्ममा परेजस्तो गर्छन् । त्यसपछि उसले फेरी प्रष्ट पार्न खोज्छिन् । अहिलेका केटीहरु १३, १४ बर्षमा महिनावारी भइसकेपछि कहाँ भ’र्जिन बाँकी रहन्छन् र ? उनले भन्न खोजेको कुरा उत्सव रसाईलीले थप क्लियर गर्न सक्दैनन् कुरा यत्तिकैमा मोडिन्छ ।
दुबै जना हासोको फोहोरामा हराउछन् । अर्को अन्र्तवार्तामा उनले कुनैपनि चलचित्रमा तपाईलाई न्यू’ड सि’नको अफर आयो भने ? अञ्जलीले त्यहाँपनि आफूलाई चुकाएकी छिन् । उनले पहिले पैसा हेर्छु कति छ त्यसपछि ओके भन्दिन्छु ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत त्यो क्लिप भाइरल छ । पैसा भए जेपनि गर्ने रहिछन् भनेर उनको तिव्र आलोचना गरिएको छ । सेलिब्रिटीहरु कहिलेकाहीँ अन्तरवार्तामा स–साना कुरामा चिप्लिँदा ट्रोलको शि’कार हुनुपर्छ ।
त्यसो त ट्रोलको शि’कार हुने नेपाली सेलिब्रेटीमा अञ्जली मात्र एक हैनन् । बोल्दा जिभ्रो चिप्लेर ट्रोलको शि’कार हुनुको पीडा सायद नायिका प्रियंका कार्कीलाई जति कसलाई थाहा होला र ? उनले केही वर्ष अगाडि एउटा अन्तरवार्तामा बोलेको संवाद अहिले पनि हाँसोको विषय बन्ने गरेको छ ।
धेरै वर्ष अमेरिका बसेकी प्रियंकाले यूएस र अमेरिका एकै हो भनेर नबुझेकी पक्कै होइनन् । तर, ऐन मौकामा जिभ्रो चिप्लिनु उनको दुर्भाग्य भएको छ । उनै प्रियंकाले केही समयअघि अर्को एउटा अन्तरवार्तामा अझै ठूलो गल्ति गरेकी छन् । आफ्ना प्रेमी आयूष्मान देशराजसँगै दिएको अन्तरवार्तामा उनको मुखबाट अञ्जानमा छाडा शब्द निस्केको थियो ।
एक प्रश्नको जवाफमा उनले भन्न चाहेकी थिएन्, ‘जोजोले हाम्रो सम्वन्ध टिक्दैन भन्नुभएको छ, उहाँहरुको पनि त्यस्तै अनुभव भएर होला ।’ तर, बोल्दा उनले ‘टिक्दैन’ को ठाउँमा अनर्थ बोल्न पुगिन् ।
त्यसो त केही समय अगाडि नायिका रेखा थापाले अन्तरवार्तामा हँसाएकी थिइन् । अमेरिका जाँदा उनले एक अन्तरवार्तामा भनेकी थिइन्, ‘अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु एकदमै होमलेस भएको मैले पाएँ ।’ खासमा उनले ‘होम सिक’ भन्न खोजेकी थिइन् । होमलेस भन्न पुगिन् । यो खबर सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरियको हो ।
Prevप्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकीले जिते दोहोरी च्याम्पियनको उपाधी
nextभाइरल झाक्रीको मृ त्यु बारे उनका बुबाले खुलाए यस्तो सनसनी पुर्ण कुरा (भिडियो हेर्नुस्)